Umaki: ukumakethwa kwangaphandle | Martech Zone
Umaki: ukumaketha ngaphandle kwekhaya
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 24, i-2015 Douglas Karr
Sivame ukungawanaki amathuba wokumaketha abonakala kakhulu asithathi usuku singalibonanga. Ukumaketha kwangaphandle emabhodini amakhulu kungenye yalezo zindlela. Njengeziteshi eziningi zokumaketha, kunamasu athile namathuba ngokukhangisa ngebhilibhodi abanye abangakwazi ukukunikeza. Futhi uma kunikezwe isu elihle, imbuyiselo yotshalomali ingadlula ngisho nezinye iziteshi zokumaketha. Amabhodi amabhodi angaba nomthelela omkhulu kumabhizinisi kuzo zonke izimboni. Kule infographic evela eSignarama